रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चय कोषका ३ लाख ६९ हजार ४५९ सञ्चयकर्ताको आवेदन, कति गुणा पर्यो जान्नुहोस..
March 15, 2018 Aagan Post0Comments
रसुवागढीमा १ लाख ८३ हजार २२४ आवेदन परेको कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माधव कोइरालाले जानकारी दिए । सञ्चयकर्ताबाट परेको आवेदनबाट ६ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । रसुवागढीले सञ्चयकर्ताका लागि १ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३३ लाख ४२ हजार ९५ कित्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो ।
यसैगरी सान्जेन जलविद्युतमा १ लाख ८३ हजार २२४ सञ्चयकर्ताको आवेदन परेको छ । आवेदनबाट ४ अर्ब १७ करोड २२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
रसुवागढी र सान्जेनको सेयर खरिद गर्न सञ्चय कोषका ३ लाख ६९ हजार ४५९ सञ्चयकर्ताको आवेदन दिएका छन् ।
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको शेयर भर्ने म्याद आज बुधबार (फागुन ३० गते) बैंकिंग समय पश्चात बन्द हुने भएको छ ।
रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाले फागुन ११ गतेदेखि दुई अर्ब ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गरेका हुन् । रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीले एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निष्काशन गरेको हो भने साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीले पनि ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको साधारण शेयर निस्कासन गरेको हो । साञ्जेनको बिक्री प्रबन्धकमा नागरिक लगानी कोष रहेको छ । त्यस्तै रसुवागढी हाइड्रोको साधारण शेयर निष्कासनको बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल र ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिएको छ । सहायक बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड, सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र एनआइबिएल क्यापिटल लिमिटेड रहेका छन् । सञ्चयकर्ताले साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनीको बढीमा ३०० कित्ता शेयर आवेदन गर्न सक्नेछन् ।
← उन्नति माइक्रोफाइनान्स (UMB)ले डाक्यो साधारण सभा, हकप्रद शेयर कति ?
शेयर बजार सुस्तायो, कस्तो कम्पनीको शेयर किन्ने ? →
शेयर बजार सुस्तायो, कस्तो कम्पनीको शेयर किन्ने ?
March 15, 2018 Aagan Post 0
मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.को नयाँवानेश्वर शाखाको समुद्घाटन